▷ Kedu laptọọpụ ị ga-azụ na 2022? Ntuziaka kachasị zuru oke yana emelitere
Kọmpat zuru oke iji were gị n'ebe niile, mana ọ dịkwa oke iji mee ngwa ndị na-achọsi ike; Ma ọ bụ na laptọọpụ bụ ngwá ọrụ kachasị mma iji rụọ ọrụ siri ike ma ọ bụ egwu egwu n'ụlọ na ọbụna n'okporo ụzọ.
Ọ bụ ezie na mbadamba na smartphones adịlarị ewu ewu, ọtụtụ ndị na-achọpụta na ihe niile site na ide akwụkwọ nyocha ruo na igwu egwuregwu vidiyo na-arụ ọrụ nke ọma na laptọọpụ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-aga na ihe nlereanya nke 4 ma ọ bụ 5 afọ gara aga na Ị maghị nke laptọọpụ ịzụrụEchegbula onwe gị, ebe a bụ ụfọdụ ntuziaka dị mkpa ga-eduzi gị na usoro dum.
Enwere ụdị nha, njirimara na ọnụ ahịa dị iche iche, yabụ ịhọrọ laptọọpụ kwesịrị ekwesị nke dabara na mkpa onye ọrụ ọ bụla bụ ihe ịma aka. Ya mere ị chọrọ chọpụta ihe mkpa nke gị bụ nke mbụ. Iji mee nke a, ị nwere ike ịgbaso usoro asatọ ndị a anyị na-enye gị na nke ga-enyere gị aka ịkọwa nke ọ bụla n'ime ha n'ụzọ dị ukwuu ma dị mma.
1 Kedu laptọọpụ ị ga-azụta dịka ojiji ya siri dị?
2 Kedu laptọọpụ ị ga-azụta dịka njirimara ya si dị?
2.3 Ndị na-eme nhazi
2.4 Usoro njikwa
3 Kedu laptọọpụ ị ga-azụta dịka ika siri dị?
4 Kedu laptọọpụ ị ga-azụ dị ka ụdị ahụ si dị?
4.1 Laptọọpụ egwuregwu
4.2 2-na-1 laptọọpụ
5 Akụkụ ndị ọzọ ị ga-atụle mgbe ị maara nke laptọọpụ ịzụrụ
5.1 Buru n'uche ndụ batrị
5.2 Ọdụ ụgbọ mmiri na njikọta
Kedu laptọọpụ ị ga-azụta dịka ojiji ya siri dị?
N'ezie, ị doro anya maka ojiji ị ga-enye laptọọpụ, n'ihi nke a, n'okpuru ebe a anyị achịkọtala ntuziaka anyị nwere ka ị nwee ike ịhọrọ kọmputa dabere na nke ahụ:
Kedu laptọọpụ ị ga-azụta dịka njirimara ya si dị?
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ laptọọpụ nwere otu njirimara mana ị maghị nke ị ga-ahọrọ, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ntuziaka anyị ka ị nwee ike họrọ nke ọma:
Tupu i kpebie ihe ọ bụla, ị ga-achọpụta kedu ihe mkpa maka "portability" ị nwere, ya bụ, ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa gị eme njem dị ukwuu n'azụ, ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ibugharị ya gburugburu ụlọ, na ihe ndị ọzọ; n'ihi na nke a ga-akọwa ihe ezigbo laptọọpụ ga-abụ maka gị na site na mgbe ahụ gaa n'ihu ị ga-ama nke laptọọpụ ịzụta. A na-ekekarị laptọọpụ site na nha ihuenyo ha:
Obere laptọọpụ: Sistemu dị gịrịgịrị ma dị mfe Ha nwere ihe dị ka sentimita 11 ruo 12 nke ihuenyo ma tụọ ihe dị n'agbata kilo 1 na 1,5. Agbanyeghị, na nke a nha, ihuenyo na ahụigodo ga-adị ntakịrị warara maka mkpa nke ụfọdụ ndị ọrụ.
Laptop 13 inch : Na-enye nguzozi kachasị mma n'etiti mbugharị na ịdị mfe nke iji. Laptọọpụ nwere ihuenyo 13- ma ọ bụ 14-inch na-atụkarị n'etiti kilos 1,5 na 2,5 ma dabara n'ụzọ dị mfe n'elu ụkwụ gị ka ị ka na-enye ya. Ahụigodo nwere mmesapụ aka yana ihe ngosi dị mfe ịhụ. Ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwụ gbakwunyere, a pụkwara ịchọta ha oke ọkụ usoro na nha ihuenyo ndị a, gụnyere 1,2 kilos Dell XPS 13 na 1,3 kilos nke 14-inch Lenovo ThinkPad X1 Carbon.
Laptop 15 inch: Nke kachasị ewu ewu, laptọọpụ inch 15 na-abụkarị nnọọ nnukwu na arọ na 2,3 ka 3 kilos, kamakwa na-eri obere. Ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ iburu laptọọpụ gị mgbe mgbe ma ọ bụ jiri ya n'apata gị, usoro 15-inch nwere ike ịbara gị uru. Ụfọdụ ụdị 15-inch na-abịa na draịva DVD, mana ị ga-echekwa ibu site n'ịchọ ihe nlereanya na-adịghị.
Laptop 17 inchỌ bụrụ na laptọọpụ gị na-anọ na tebụl gị ụbọchị niile na ụbọchị ọ bụla, usoro 17 ma ọ bụ 18-inch nwere ike ịnye gị ụdị ikike nhazi nke ịchọrọ igwu egwu egwuregwu dị elu ma ọ bụ rụọ ọrụ niile na ọkwa ọrụ. N'ihi ọkpụrụkpụ ya, akwụkwọ ndetu na nke a size nwere ike inwe nnukwu voltaji quad core CPUs, kaadị eserese dị ike y otutu nchekwa nkeji. N'ezie, echela na ị ga-ewere usoro ndị a karịa 3 kilos n'ebe ọ bụla.
Mkpebi dị elu pụtara ogo onyonyo ka mma. Ihuenyo laptọọpụ na-abịa n'ụdị mkpebi dị iche iche a na-atụ na pikselụ (horizontal x vetikal).
HD. 1366 x 768, mkpebi ọkọlọtọ na akwụkwọ ndetu dị ala. O zuru ezu ịfụgharị ịntanetị, e-mail na ọrụ ndị bụ isi na kọmputa.
HD +. 1600 x 900, mkpebi a dị mma maka egwuregwu oge ụfọdụ na ikiri ihe nkiri DVD.
Full HD. 1920 x 1080, mkpebi a na-enye gị ohere ikiri ihe nkiri Blu-ray ma kpọọ egwuregwu vidiyo na-enweghị atụfu nkọwa ọ bụla.
Retina. 2304 x 1440, 2560 x 1600, na 2880 x 1800. Enwere ike ịchọta ya na Apple's 12 '', 13.3 '', na 15.6 Mac akwụkwọ ndetu, n'otu n'otu.
QHD (Quad HD) na QHD +. Na mkpebi 2560 x 1440 na 3200 x 1800 n'otu n'otu. Njupụta pixel dị elu na-emepụta ọtụtụ nkọwa. Kwesịrị ekwesị maka foto, vidiyo ma ọ bụ ndị ọkachamara na-ese foto, nke a bụ ihe mere ị ga-eji chọta ọtụtụ na laptọọpụ kacha mma maka eserese eserese. Ọzọkwa maka ndị na-eji ọtụtụ awa egwu egwu.
4K Ultra HD. Mkpebi 3840 x 2160 nwere pikselụ okpukpu anọ karịa Full HD. Mepụta agba na onyonyo bara ụba ka ilele na dezie eserese ndị na-adị ka ndụ.
Ma ọ bụghị naanị mkpebi ahụ dị mkpa mgbe ị na-aza ajụjụ nke laptọọpụ ịzụta. I kwesịkwara ịṅa ntị na ụdị panel dị iche iche ka ha na-emetụta kpọmkwem àgwà oyiyi anyị nwetara. Nke a bụ nhọrọ nke ụdị ndị bụ isi:
IPS Ọ bụ mgbanwe nke panel TFT-LCD. Na-eme ka mpaghara ọhụụ dịkwuo mma ma nwee oge nzaghachi dị mkpụmkpụ. E mekwara ha iji meziwanye ihe a niile na obere ngwaọrụ, dị ka ekwentị mkpanaaka.
TN ha bụ ogwe nwere oge nzaghachi ngwa ngwa, nke na-eme ka ha bụrụ ezigbo ndị na-eme egwuregwu. Ha bụ ogwe ndị nwere ọnụ ahịa nrụpụta dị ala, mana ha enweghị akụkụ nlele dị mma ọ bụ ezie na agba agba ha ka mma n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
OLED Ha bụ ihuenyo nke na-enye ọdịiche dị mma nke agba agba, ihe nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na ndị ojii dị ọcha. Ọzọkwa, ha na-agbanwe agbanwe, na-ekwe ka ndị na-emepụta ihe mepụta ngwaọrụ nwere atụmatụ nwere ike ịgụnye akụkụ. N'ihe gbasara nnwere onwe, enwere ike ịbawanye ma ọ bụrụ na ejiri ndabere ojii mee ihe, ebe ọ bụ na pikselụ agbanyụrụ anaghị eri ike.
Ikanam ha na-ebunye isi iyi ọkụ nke mejupụtara ihe semiconductor nwere ọnụ ụzọ abụọ. Ụdị mbụ pụtara na 60, ma ọ bụghị na ihuenyo. Ihe kachasị mma ya mgbe ọ na-abịakwute ndị nlekota bụ na ha nwere ogologo ndụ bara uru ma na-eguzogide ọgwụ.
Mana ka ị mara laptop ị ga-azụta, anyị ga-egosi gị n'okpuru Isi ihe ndị ị ga-eburu n'uche.
Kedu ihe bụ mmefu ego gị? N'oge a, ị kwesịrị ịma na enwere ike nweta laptọọpụ obere obere ihe na-erughị € 450, mana ọ bụrụ na ị nwere ike itinyekwu ego na ya, ị ga-enwe ike nweta sistemu nwere ogo dị elu, nguzogide siri ike na nhụta anya ka mma.
Laptọọpụ n'okpuru € 500Laptọọpụ dị ọnụ ala dị ọnụ ala bụ Chromebooks, nke na-agba na sistemụ arụmọrụ nke Google, ma ọ bụ sistemu Windows dị ala nwere obere nchekwa yana ndị na-eji nwayọ nwayọ, dị ka HP Stream 11. Onye ọ bụla nwere ike ịghọ a ezigbo ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ maka ụmụaka, karịsịa ma ọ bụrụ na ịzụtara otu n'ime obere laptọọpụ dị ka Chromebooks nke na-adịru ogologo oge (awa 8 ma ọ bụ karịa) n'otu ụgwọ. N'ihe na-erughị € 500 ị nwere ike nweta laptọọpụ nwere Intel Core i5 processor ma ọ bụ AMD A8 CPU, 4 ruo 8 GB nke RAM na draịvụ 500 GB, njirimara niile dị mma. Agbanyeghị, n'ọnụ ahịa a, ọtụtụ akwụkwọ ndetu nwere chassis rọba dị ọnụ ala, ngosipụta dị ala, yana ndụ batrị adịghị ike.
Laptọọpụ n'okpuru € 1.000: Ka ị na-aga n'elu $ 500, ị ga-amalite ịhụ ihe ndị ọzọ dị elu, dị ka ọla dara. Ndị na-emepụta ihe na-amalitekwa ịgbakwunye atụmatụ ndị ọzọ dị n'ebe ahụ iji bulie ọkwa ọnụahịa, gụnyere a Ahụigodo ọdịyo na azụ ọkụ ka mma. Ị nwekwara ike ịnweta ihuenyo nwere mkpebi nke bụ 1600 x 900 ma ọ bụ 1920 x 1080 yana cache flash.
Laptọọpụ karịrị € 1.000: N'ime ọnụ ahịa ọnụahịa a, ị na-atụ anya ka laptọọpụ karịrị obere ibu, dị ike, ma ọ bụ abụọ. Na-eche elu mkpebi ngosi, ngwa ngwa processors, na ikekwe discrete eserese. Akwụkwọ ọkụ dị ọkụ, nke na-adịgide adịgide dị ka MacBook Ikuku nke anụ ọhịa iri na atọ yana ole na ole ndị ọzọ na-eri ihe karịrị $ 13. Sistemụ egwuregwu egwuregwu dị elu na ebe a na-arụ ọrụ mkpanaka na-eri ihe ruru $1.000 n'oge ụfọdụ.
Ndị na-eme nhazi
Mgbe ị na-eche banyere ịzụrụ laptọọpụ ọhụrụ, ị ga-atụle processor dị ka a ga-asị na ọ bụ ụbụrụ nke igwe. Ọ na-arụ ọrụ na Nchikota na usoro ebe nchekwa. Ike nke processor na-ekpebi mgbagwoju anya nke ngwanrọ ị nwere ike iji, ọtụtụ mmemme ị meghere n'otu oge, yana ngwa ngwa ngwa ndị a nwere ike ịga. Ọtụtụ na-eji processors sitere na Intel ma ọ bụ AMD. Anyị na-aga ịhụ ihe ndị kasị nkịtị na nkọwa.
Ndị na - eme Intel
Ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ha na-eche ihe laptọọpụ ha ga-azụta, ha na-eche kpọmkwem maka ika a ebe ọ bụ na ọ bụ ihe kachasị ngwa ngwa na-abata n'uche. Ndị na-arụ ọrụ Intel bụ obi nke MacBook ọgbara ọhụrụ ọ bụla, a na-ahụkwa ya na ọtụtụ laptọọpụ Windows. Ndị a ka na-ahụ nke ọma bụ nke dị iche iche nuclei (Intel Core):
I7 isi. Otu n'ime ndị na-azụ ahịa kacha mma sitere na Intel. A na-eji ha ahọrọ ndị ọrụ siri ike ma na-achọsi ike na ojiji ya. Dịka ọmụmaatụ, ndị egwuregwu, ndị na-ese foto, ndị na-ese foto ma ọ bụ ndị na-edezi vidiyo. Ọ na-eme nke ọma n'ijikwa multitasking n'enweghị nsogbu ọ bụla yana ịchọ ihe okike multimedia maka ọrụ 3D nkọwa dị elu.
I9 isi: Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ike Intel processor. Ọ bụ ndị ọkachamara na-achọsi ike na-ahọrọ ya, n'etiti ndị anyị nwere ndị na-egwu egwuregwu na-achọghị ihe ịtụnanya n'ụdị lag, jerks ma ọ bụ ịchụ àjà anya na egwuregwu vidiyo, karịsịa mgbe ị na-ekerịta egwuregwu ha. Ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ahọrọ ya n'ihi na ọ nwere ike ịkwaga mmemme ntinye vidiyo na-achọsi ike n'ụzọ dị mfe.
I5 isi. The etiti nso nke Core processors, na n'ezie otu n'ime ndị kasị ọtụtụ ebe na-emekarị. Ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ha chere "kedu laptọọpụ m na-azụta", nke a bụ ụdị nhazi mbụ na-abata n'uche. O nwere ike zuru oke maka ọtụtụ ọrụ yana ọtụtụ ọrụ, yabụ ị nwere ike ịme egwuregwu ịchọrọ ma ọ bụ egwuregwu ahụ mgbe ị na-eziga ụfọdụ ozi ịntanetị.
I3 isi. N'ime ndị na-arụ ọrụ Core, ụdị i3 bụ ihe kachasi mkpa. Karịa dabara adaba maka mmemme ụbọchị na-anaghị achọ dị ka izi ozi, ịntanetị na ọrụ nrụpụta. Ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma maka mmemme dị ka ige egwu na ihe ndị ọzọ.
Celeron: A na-ezubere ndị na-arụ ọrụ Celeron maka iji ya eme ihe kwa ụbọchị, maka kọmputa ntinye ọkwa na akụrụngwa nwere ihe dị ntakịrị karịa, nke a ga-ahụkwa na ọnụahịa ikpeazụ.
Core M. A processor e mere maka ebughibu ụdị dị ka akwụkwọ ọgụgụ ọzọ isi. Ọ na-enye ike zuru oke iji mee ka ị chọgharịa ịntanetị ma ọ bụ zipu ozi-e na-etinyeghị ikike nke ngwaọrụ gị kpamkpam.
Na laptọọpụ ndị ọzọ dị ọnụ ala, ị ga-ahụkwa ndị nrụpụta dị ka Intel Pentium ma ọ bụ Celeron. Ndị a nwere ike ịdị mma maka izipu ozi, ịntanetị, yana ọrụ nrụpụta. Mana ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụrụ laptọọpụ ọhụrụ ịchọrọ ịtụle ọsọ na multitasking, ikike ndị a nwere oke ọ gwụla ma ị na-elele ụdị ndị dị n'elu.
Ndị nrụpụta AMD
Nke a ika nke processors nwere abụọ kasị nkịtị na-eji edemede. FX na A-Series. Dị ka ibe Intel Core, ndị nhazi ndị a na-agụnye ihe nrụpụta eserese arụnyere n'ime ya. Site na nke kachasị mma ruo nke kachasị njọ, anyị na-ahụ ihe ndị a:
Ryzen. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke processors ka i wee nwee ike ime ya niile n'otu oge na-enweghị fissures.
Adị- N'etiti nhazi ọkwa ntinye, nke ga-enye gị arụmọrụ kachasị mma.
FX. Maka nke kachasị njọ mgbe anyị na-ekwu maka ọtụtụ ọrụ ike na egwuregwu.
A10. The flagship nke AMD, a dị ezigbo mma na-agba na anọ cores na ahụkebe ndịna mmepe.
A8. Mmepe eserese emelitere nke na-enye gị ohere itinye onwe gị na ụwa 3D na HD.
A6. Ogo vidiyo siri ike yana ihe ị ga-ahụ na foto a.
A4. Ọ na-enye nnukwu ohere maka foto, vidiyo na egwu.
E-usoro. Yiri Intel Celebron na Pentium processors. Mgbe ị na-eche maka laptọọpụ ị ga-azụta, ndị a abụghị ndị mbụ na-abata n'uche, n'agbanyeghị na ha bara uru maka ime ihe omume na-enweghị oke ọsọ. Enweghị nsogbu na iji ha maka ụdị nkịtị na ihe ndị na-adịghị achọ ọtụtụ nkà na ụzụ.
Enwere variants na klaasị processor. Laptọọpụ ndị a haziri nwere nnukwu ndụ batrị na-enwekarị ụdị nrụpụta obere volt nke ndị nrụpụta edepụtara, nke na-atụgharị gaa n'ibelata ọsọ.
Maka ndị nke raara onwe ha nye imewe ma ọ bụ egwuregwu, na nchọ gị maka laptọọpụ ọhụrụ, ị ga-aga maka ndị nwere eserese raara onwe ha nye na ebe nchekwa vidiyo. Inwe ihe dị iche iche maka eserese gị na-enye gị ohere ịnweta nhazi ngwa ngwa na nke dị nro nke ndị a mgbe ị na-ekiri ihe nkiri ma ọ bụ na-eme ihe ọ bụla metụtara ya.
na ngwakọ n'etiti mbadamba na laptọọpụ Ndị dị oke ọnụ na-ejikarị Intel's Core M CPU, nke dị ngwa karịa nke Atom, mana ọ bụghị ngwa ngwa dị ka Core's Core (Core i3, i5, i7 ma ọ bụ i9). Ọ bụrụ na ịzụrụ Core i3, Core i5 ma ọ bụ Core i7, gbalịa nweta ọgbọ ọhụrụ bụ Intel 2020th ​​ọgbọ, dịlarị site na mmalite nke XNUMX.
A bịa n'ịrụ ọrụ, echekwala ihe na-erughị ihe nrụpụta Intel Core M maka sistemu slim ma ọ bụ Core i3/AMD A Series CPU maka kọmpụta mbụ. Ọ bụrụ na ị na-emefu ihe karịrị € 500, jụọ na opekata mpe, CPU bụ Intel Core i5, nke nwere ike ịbawanye ọsọ elekere ya mgbe ọ dị mkpa ịrụ ọrụ dị elu. Ndị ọrụ ike na ndị egwuregwu kwesịrị idozi ihe na-erughị usoro Core i7, ọkachamma mgbawa quad core.
Nke a abụghị ihe dị mfe ịza ajụjụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-amaghị ma Mac na PC.
Achọtara na laptọọpụ dị ọnụ ala ma dị mfe dị ka 11.6-inch Acer C720 na HP Chromebook 14, Google Chrome OS bụ. nke usoro ikpo okwu kachasị mfe na nke dị nchebe nke dị na ahịa dị ugbu a, mana ị nwekwara ike ịdị ntakịrị ntakịrị n'ihe gbasara arụmọrụ. Ihe nhụta onye ọrụ na-adị ka Windows ọdịnala nwere menu ngwa, desktọpụ, yana ikike ịdọrọ windo gburugburu ya. Window isi ndabara ị ga-eji bụ ihe nchọgharị Chrome na ọtụtụ “ngwa” bụ naanị ụzọ mkpirisi maka ngwaọrụ webụ.
N'ihi na ọ bụ isi ihe nchọgharị, Chrome OS o yighị ka ọ ga-ebute ya na malware ma ọ bụ nje Ma, ọ bụrụ na ị jirila kọmpụta ọzọ chọgharịa webụ, ọ ga-adị gị ka ị nọ n'ụlọ site na ikpo okwu nke maara nke ọma. Ihe dị njọ bụ na e nwere ngwa ndị na-anọghị n'ịntanetị ole na ole ma ndị dị adị anaghị arụ ọrụ nke ọma mgbe niile. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaọrụ maka ịfụgharị webụ, ịlele email, mgbasa ozi ọha, na ịkparịta ụka n'ịntanetị, HP Chromebook adịghị ọnụ, enwere ike ibugharị nke ukwuu, ma nwee ogologo ndụ batrị.
Hụ ụdị Chromebook kacha mma
Laptọọpụ Windows na-adịkarị ọnụ karịa Mac (malite na ihe na-erughị $ 400) ma na-enye ọtụtụ nhọrọ nhazi nke ukwuu karịa ndị na-ere ahịa iri na abụọ. N'adịghị ka Apple, Microsoft na ndị mmekọ ha kwe ka ndị ọrụ zụta akwụkwọ ndetu nwere ihuenyo mmetụ akayana atụmatụ ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe nke na-enye gị ohere ịgbanwe ngwa ngwa site na laptọọpụ gaa na ọnọdụ mbadamba.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows interface, mana ị nwalebeghị ya Windows 10 ụdị ma ị maghị kọmputa ị ga-azụta, ị nwere ike ịnọ na ya maka nnukwu ihe ijuanya. Sistemu eji arụ ọrụ ọhụrụ ejirila ụdị mosaic, ihuenyo mmalite zuru oke dochie menu mmalite, mgbe ụfọdụ na-egosipụta ngwa dị mfe iji, dabere na mmetụ aka. Otú ọ dị, Windows 10 ka nwere ọnọdụ desktọpụ iji mee ngwa gị niile dị ugbu a ma nwee ike ịpụ ya ozugbo. Ọ naghị esiri ike, yana ụfọdụ akụrụngwa na tweaks, ịgbakwunye menu mmalite ma mee ka desktọọpụ dị ka Windows 7 ọzọ.
Ụfọdụ laptọọpụ Windows na-enye ọrụ azụmahịa dị ka kaadị smart na nkwenye biometric na njikwa nke sistemụ Intel vPro.
Hụ kọmpụta kacha mma dị ọnụ ahịa
Apple MacBook Airs na MacBook Pros na-enye a mfe iji sistemụ arụmọrụ na macOS. N'ezie, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịhụ macOS mfe ịnyagharịa karịa ọhụrụ na obi ike ụdị nke Windows 10. MacBooks na-enye iOS-dị ka ihe ngosi mpe mpe akwa maka ngwa ha, yana mmegharị ahụ ọtụtụ mmetụ aka dị elu, na ike jikwaa iPhone oku, n'ihe banyere inwe otu.
MacBook Airs na MacBook Pros na-adịkarịkwa karịa ọtụtụ igwe Windows ma a bịa n'ichepụta ụlọ ọrụ na ihe mmetụ aka. Mgbe Windows PC na-enye ọtụtụ nhọrọ ngwanrọ, Apple na-eme ka ọ dị mfe ịchọta na ịwụnye mmemme site na Mac App Store. Otú ọ dị, Apple laptọọpụ nwere a Ọnụahịa mmalite nke € 800.
Hụ ahịa kacha mma na MacBook
Ver ebe a Ultrabooks nke puru iche.
Kedu laptọọpụ ị ga-azụta dịka ika siri dị?
Laptọọpụ gị dị mma naanị ka ụlọ ọrụ dị n'azụ ya. A enyemaka teknụzụ ziri ezi na nke oge Ọ bụ isi. Nke a afọ gara aga Apple buru ụzọ bia, sochiri ya HP y Samsung.
N'okpuru, ị nwere nhọrọ ntuziaka nke anyị na-enyocha akara laptọọpụ ọ bụla wee gosi gị ụdị kachasị mma nke nke ọ bụla nwere ugbu a:
Chọta ebe a ụdị kọmpụta kacha mma.
Nkwado nka na ụzụ bụ naanị akụkụ nke ihe na-eme ka akara laptọọpụ bara uru ego ya. Ị ga-atụlekwa ka onye nrụpụta na-asọmpi asọmpi n'ihe gbasara imewe, ịdị mma na nhọrọ, ule, na njirisi ndị ọzọ. Apple na-ewerekarị ọnọdụ mbụ, Lenovo na ASUS sochiri ya.
Kedu laptọọpụ ị ga-azụ dị ka ụdị ahụ si dị?
N'otu aka ahụ na e nwere ọtụtụ narị njikọta nke ị nwere ike iji ihe niile anyị kwurula ebe a, ịhọrọ laptọọpụ na-adịrị ụfọdụ mfe mgbe ụfọdụ mgbe ha ghọtara na e nwere ụdị na ahịrị kọmputa maka ihe ha na-achọ. otú a ka search na-ebelata ntakịrị. Ndị kachasị ewu ewu bụ ndị a:
Ha bụ laptọọpụ ndị emebere ka ha nwee ike igwu egwu maka ihe ha bụ ụdị dị ike. Ha nwere ndị nrụpụta dị elu dị ka ndị a kpọtụrụ aha na kaadị eserese nke na-enye ohere ịme egwuregwu ngwa ngwa ma dị nro. Ha na-egosipụtakwa ike egwu egwu na nha ihuenyo iji nyere aka mee ka egwuregwu ahụ dị ndụ n'ezie.
Ebe a zuru ezu ntụnyere nke Laptọọpụ egwuregwu kacha mma.
Ụfọdụ na-agụnye ahụigodo a na-ahụkarị nke nwere ọkụ yana ihe mgbakwunye na-atọ ụtọ iji mee ka nnọkọ ahụ dịkwuo mfe ma na-atọ ụtọ. N'agbanyeghị nke ahụ, atụmatụ ndị a siri ike na-emekarị ka kọmputa na-ekpo ọkụ na igbapu batrị, yana ịdị arọ karịa ka ọ dị. Naanị ị ga-eche ma ị ga-agbanwe ebe ya ma ọ bụ tinye ya n'otu ebe n'ụlọ gị.
Mgbe ị jụrụ onwe gị nke laptọọpụ ịzụrụ, mgbe ụfọdụ ihe ị na-achọ bụ ike ha na-enye gị ma ị ga-achọ ibugharị nke mbadamba nkume. Nke ahụ bụ mgbe ọ na-adọrọ mmasị ịtụle 2-in-1s (aka convertibles or hybrids). Ngwa ndị a nwere ike ihu ihuenyo mmetụ dị iche iche nke enwere ike ịtụgharị ka ọ bụrụ mbadamba n'oge. Ha na-enye akụkụ zuru oke maka igosi na ọrụ ma ọ bụ soro ihe ngosi kachasị amasị gị na ihe ndina.
Na-atụle ntụnyere laptọọpụ 2-in-1 a.
Na mbụ kọmpụta ndị ahụ Google mepụtara. Akwụkwọ Chrome nke taa na-abịa n'ụdị nkọwapụta dị iche iche, mgbe ụfọdụ nwere nhazi dị ike nke ukwuu. Ihe dị iche n'etiti Chromebook na ndị ọzọ bụ ojiji Chrome oS. Sistemu eji arụ ọrụ Google nwere emebere ka ọ na-agba ọtụtụ ngwa site na igwe ojii. Site n'ime nke a, Chrome OS na-ebelata mkpa ikike draịva siri ike, na-enye ha ohere ịbụ thinner na Mkpa ọkụ.
na Akwụkwọ Chrome ewepụtara nyochaa.
Na kọmputa ndị a na-ahụkarị, ịchekwa data na-eme ka ngwaọrụ ahụ kwụsịlata ka oge na-aga. Akwụkwọ Chrome na-ewepụ nke a ebe ọ bụ na echekwara ọtụtụ mmemme na ntanetị ma na-arụ ọrụ site na ihe nchọgharị. N'ezie, nke a pụtara na a ga-eji akwụkwọ chrome mee ihe na njikọ ịntanetị. Google agbaala ndị nrụpụta ngwa ume na nso nso a ka ha rụọ ọrụ na-anọghị n'ịntanetị. Ma n'ezie na nke a ị chọrọ ezigbo njikọ ịntanetị, ma maka ndị na-eji ya mgbe niile ma na-agụ akwụkwọ ntuziaka a maka ịhọrọ laptọọpụ, nke a bụ ihe ọzọ oru oma na ọnụ.
A na-akpọ Ultrabooks n'ezie dị ka okwu nche anwụ maka akwụkwọ ndetu ọkụ ọkụ ndị ahụ. Agbanyeghị, ọ bụ na mbụ ọ bụ okwu ejiri maka kọmpụta Intel. Ụdị ndị a na-ewepụ akụkụ ndị a na-ejikarị eme ihe ugbu a dị ka oghere CD ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri, mana na-eji ihe nhazi dị ike karị. Anyị nwere ike ịsị na ha dị ọcha ụdị nke kacha arụpụtaghị ihe na obere ntụrụndụ, ọ bụ ezie na n'ezie ọ ga-adabere na ojiji nke ị chọrọ inye ya.
Akụkụ ndị ọzọ ị ga-atụle mgbe ị maara nke laptọọpụ ịzụrụ
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe laptọọpụ zụta, ị ga-amarakwa na àgwà nke laptọọpụ dị ka CPU, diski ike, RAM na kaadị ndịna-emeputa nwere ike mgbagwoju anya ọbụna laptọọpụ Fans, otú ahụ adịghị njọ ma ọ bụrụ na teknuzu data Ibé akwụkwọ nke ụdịdị dị ka ihe dị ka mkpụrụ akwụkwọ ofe n'anya gị karịa ihe ọ bụla. ọzọ.
Ihe dị gị mkpa dabere n'ihe ị na-eme atụmatụ iji ngwaọrụ mkpanaka gị mee. Ọrụ ndị siri ike dị ka egwuregwu 3D na mmemme ndezi vidiyo dị elu chọrọ akụrụngwa dị oke ọnụ karịa.
RAM: Mgbe ọ na-abịa na ebe nchekwa, ma ọ bụ RAMọbụlagodi Laptọọpụ dị ọnụ ala nwere 4GB n'oge a, n'ihi ya, edozila obere ihe. Ọ bụrụ na ị nwere ike nweta usoro nwere 6 ma ọ bụ 8 GB, ị ga-adị njikere nke ọma maka ngwa ndị dị elu na ọtụtụ multitasking. Ndị egwuregwu na ndị ọrụ dị elu kwesịrị ịchọ 16GB nke RAM.
Draịvụ ike: Maka ọtụtụ ndị ọrụ, ngwa ngwa ngwa ngwa dị mkpa karịa nnukwu. Ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ ịhọrọ, họrọ draịva siri ike n'etiti 7.200 rpm na 5.400 rpm. Ọbụlagodi na ị nwere ọtụtụ ihe nkiri na egwuregwu na draịvụ ike gị, 320GB kwesịrị inye ohere karịa, mana draịva 500GB ma ọ bụ 750GB anaghị akwụkarị ụgwọ karịa. N'ihe gbasara ịchọrọ ịzụta draịvụ ike mpụga, anyị na-akwado ịme ọchụchọ dị mma. Taa ị nwere ike ịhụ ụdị 1TB n'ahịa n'ọnụ ahịa nke bụ nrọ nke ọtụtụ. Maka ihe na-erughị € 50 ị nwere ebe nchekwa ebe niile. Na ndị ọzọ na-atụle na taa dum isiokwu nke fim na ndị ọzọ na-hụrụ na gụgharia. Ma ọ bụ 500GB, 2TB, ma ọ bụ 3TB.
Flash cache: Mgbe ụfọdụ ụfọdụ Ultrabooks na akwụkwọ ndetu ndị ọzọ na-abịa na 8, 16 ma ọ bụ 32 GB nke cached flash nke ị nwere ike iji mee ka arụmọrụ dịkwuo elu. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ngwa ngwa dị ka SSD, cache flash ga-enyere gị aka ịkwalite ibu na oge buut, mgbe ekwe gị chekwaa data gị niile na nnukwu draịvụ ike.
draịva steeti siri ike (SSDs): Ndị a nkeji na-eri ntakịrị ihe karịa omenala ike draịva na nwere obere ikike (na-abụkarị 128 ruo 256 GB), mana nwere ike melite arụmọrụ nke ukwuu. Ị ga-anụ ụtọ oge buut ngwa ngwa, oge ịmaliteghachi ngwa ngwa na oge igbu oge. Ọzọkwa, n'ihi na SSD enweghị akụkụ na-akpụ akpụ dị ka draịva n'ibu, ọdịda bụ obere ihe agaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ebe a ị ga-ahụ Laptọọpụ kacha mma nwere SSD
Ihu mmetụ akaWindows 10 bụ naanị ihe na-atọ ụtọ ma na-adọrọ adọrọ na ihuenyo mmetụ, mana ọ bụrụ na laptọọpụ gị abụghị ngwakọ nwere ihuenyo na-agbanwe ma ọ bụ na-atụgharị, ị nwere ike ịdị ndụ na-enweghị ya. Agbanyeghị na ị nwere ike nweta sistemu ihuenyo mmetụ maka € 450 taa, ọnụ ahịa dị iche n'etiti sistemu ahaziri n'otu aka ahụ yana na enweghị ihuenyo mmetụ bụ € 80 ruo € 130.
Ihe mgbawa eserese: maka ọtụtụ akụkụ, a mgbawa eserese agbakwunyere (onye na-ekerịta usoro ebe nchekwa) ga-abụ dị mma maka ọrụ ndị bụ isi, gụnyere ịgagharị na webụ, ikiri vidiyo, na ọbụna igwu egwuregwu ụfọdụ. Ma discrete ndịna-emeputa processor nke AMD ma ọ bụ Nvidia (nke nwere ebe nchekwa vidiyo raara onwe ya nye) ga-enye a ịrụ ọrụ ka mma mgbe ọ na-abịa na egwuregwu kacha achọ. Kedu ihe ọzọ, ezigbo GPU nwere ike ime ka ọkpụkpọ vidiyo dị ngwa na saịtị dị ka Hulu, yana ọsọ ọsọ video mbipụta.
Dịka ọ dị na CPU, enwere ibe eserese abụọ dị elu na nke dị ala. Nvidia na-edobe ndepụta nke ibe eserese ya site na ala ruo na njedebe dị elu dị ka AMD si eme. N'ozuzu, ebe a na-arụ ọrụ na laptọọpụ egwuregwu ga-akacha mma GPU, gụnyere eserese abụọ na sistemu dị oke ọnụ. Nke a bụ nhọrọ nke eserese kacha ewu ewu nke laptọọpụ na-ebugo:
Ihe ngosi nka Ọ bụ atụmatụ Intel maka Integrated Graphics Processors (IGP). A na-etinye ha na otu CPU ma dị na kọmpụta niile, mana ọkachasị na akụrụngwa etiti.
Nvidia otu n'ime ụdị ama ama na mpaghara kaadị eserese na GPU. Ha nwere nhọrọ ndị na-adaba na mkpa niile na ọ na-ahụkarị ịhụ kaadị ha na akụrụngwa dị ike dịka nke eji eme egwuregwu vidiyo.
RADEON Ọ bụ akara ama ama maka GPU na chipsets ya. Ugbu a ọ bụ nke AMD na, dị ka Intel Graphics, ọ dị na ụdị ngwaọrụ niile, mana ọ nwere aha ọhụrụ ya, n'ime nke anyị nwere Radeon ma ọ bụ.
DVD / Blu-ray draịva: Ọtụtụ kọmputa ndetu n'oge na-abịa obere na obere na ngwa anya draịva. Nke ahụ bụ n'ihi na ị nwere ike budata ngwanrọ ọzọ wee budata ma ọ bụ bunye vidiyo na webụ. Ọ gwụla ma ị na-agba diski ma ọ bụ chọọ ikiri ihe nkiri Blu-ray, Ịchọghị otu n'ime nkeji ndị a ma ị nwere ike ịchekwa ntakịrị ibu ibu.
Buru n'uche ndụ batrị
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ebuga laptọọpụ gị site na tebụl gị gaa n'ihe ndina na akwa ma ọ bụ site na cubicle gị gaa n'ọnụ ụlọ ogbako, ndụ batrị bụ ihe dị mkpa. Ọ dịghị onye chọrọ ka agbụ ya n'agbụ n'ọnụ ụzọ, ọ bụrụgodị na e nwere ebe a ga-esi nweta ya. Ọ bụrụ na ị ga-azụta laptọọpụ inch 15, chọta onwe gị ọ dịkarịa ala awa 4 nke ntachi obi ebe ọ bụ na n'ozuzu na-adị mkpụmkpụ-adị ndụ. Ndị na-eme atụmatụ ịkwagharị kwesịrị ịhọrọ laptọọpụ ndị na-enye ihe karịrị awa 6 nke ndụ batrị, yana awa 7 ọzọ bụ nhọrọ kacha mma.
Ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ, kwụọ ụgwọ karịa maka batrị ogologo, ị gaghị akwa ụta ya. Biko mara na ụfọdụ laptọọpụ (dị ka MacBook Air) nwee ogologo ndụ batrị ma ha nwere njirimara nke batrị mechiri emechi, nke na-adịghị mfe imelite n'onwe gị.
Iji chọpụta ihe Ogologo ndụ nke batrị laptọọpụ, ewerela okwu onye nrụpụta maka ya. Kama, gụọ nsonaazụ ndị ọzọ sitere na isi mmalite (webụsaịtị anyị). Ndụ batrị gị ugbu a Ọ nwere ike ịdị iche dabere na nchapụta ihuenyo yana ọrụ ị ga-arụ (vidiyo na-eri ike karịa ịfụgharị ụgbụ).
Ọdụ ụgbọ mmiri na njikọta
Laptọọpụ na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ iji jikọọ na ịntanetị yana ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọtụtụ n'ime ndị a nwere ụkpụrụ Bluetooth ma ọ bụ ịntanetị kachasị ọhụrụ ka ị nwee ike ịmekọrịta ekwentị gị, igwe okwu ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ enwere ike ibugharị.
Ọ bụrụ na ị na-eme njem ugboro ugboro, tụlee laptọọpụ na-ejikọta na netwọk 4G LTE ka ị nwee ike jikọọ na ịntanetị na-ejighị Wi-Fi.
Na mgbakwunye, ọ na-adọrọ mmasị na ị nwere ọdụ ụgbọ mmiri ndị a na-eji jikọọ na TV, igwefoto ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ:
USB 2.0. Jikọọ draịvụ ike mpụga, ndị na-ahụ maka egwuregwu, ekwentị mkpanaaka, ndị egwuregwu MP3 na ngwa ndị ọzọ.
USB 3.0. Ha na-ebufe data ngwa ngwa karịa USB 2.0, mana naanị ma ọ bụrụ na ejirila ngwaọrụ USB 3.0.
Ụdị USB-C. Ọ na-enye nnukwu ọsọ na ike dị iche iche, na-eji njikọ njikọ yiri nke na-arụ ọrụ n'akụkụ abụọ ahụ. Ihe nkwụnye ndị dị na-enye ohere maka vidiyo na-adọrọ mmasị na ndakọrịta.
thunderbolt. Nyefe ngwa ngwa maka faịlụ n'etiti ngwaọrụ nwere Thunderbolt. Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ nwere ụfọdụ njikọ, m ga-aga Thunderbolt ma ọ bụrụ na m nwere ego.
HDMI. Ị nwere ike ijikọ projector ma ọ bụ HD ihuenyo na ihuenyo TV gị.
Oghere kaadị. Iji jikọọ kaadị igwefoto gị wee bufee foto na vidiyo.
Ịmara nke laptọọpụ ịzụrụ anaghị adị mfe mgbe niile. Ọ bụ ezie na ntuziaka anyị adịla ọtụtụ, anyị nwere olileanya na anyị enyerela gị aka ịpụ na obi abụọ ma nwee ike ịme nhọrọ kachasị mfe.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị ka nwere obi abụọ, ị nwere ike ịhapụ anyị okwu mgbe niile ma anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhọrọ kọmputa ọhụrụ gị.
Ọ bụ ezie na n'ezie, ihe na-ekpebi azịza nke laptọọpụ ịzụta bụ ọnụ ahịa na nha ihuenyo. Site na ndị ahụ, anyị ga-ahọrọ ma ọ bụ tụfuo mana ọ bụ mmalite mmalite ma ọ bụrụ na ịmaghị laptọọpụ ị ga-azụta.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nduzi » Kedu laptọọpụ ị ga-azụ?
13 kwuru na "Kedu laptọọpụ ị ga-azụ?"
Ọktoba 2017-06 na elekere 17:7 nke abalị
Ahụrụ m akụkọ gị n'anya. Abụ m onye ọrụ nwere obere ihe ọmụma kọmputa, a na m arịọ gị ka ị nyere m aka ịhọrọ. Laptọọpụ m agbajiri agbaji, ana m achọ ịzụta nke ọhụrụ. M na-eji ya na ọkwa onye ọrụ, na-eji ọrụ ụlọ ọrụ, ịgụ akwụkwọ akụkọ, lelee netwọk mmekọrịta dịka Facebook, wattshap web, Skype, ụfọdụ ngwa weebụ na karịsịa ikiri TV mgbe a na-anabata m n'ụlọ ọgwụ, site na yomvi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. netwọk TV. Ya mere, ọ ga-amasị m ka ọ bụrụ ngwa ngwa yana ịdị elu oyiyi maka telivishọn. Ị nwere ike inyere m aka? Kedu laptọọpụ ị ga-adụ m ọdụ? Ana m ekele gị n'ihu maka enyemaka gị na imekọ ihe ọnụ. Ekele.
Ọktoba 2017-06 na elekere 18:11 nke ụtụtụ
Ndewo Luis. Daalụ nke ukwuu maka okwu ọma ahụ. Tupu ịkwado ihe na ịchọ ya nke ọma, ọ ga-amasị m ịma mmefu ego ị nwere.
Ọktoba 2017-06 na elekere 01:4 nke abalị
Ndewo, achọrọ m ịzụta laptọọpụ ma amaghị m nke m ga-ahọrọ, ọ bụ ezie na m doro anya na achọrọ m MacBook, amaghị m ma ikuku ma ọ bụ pro. Abụ m onye nkuzi, m na-eji laptọọpụ arụ ọrụ, chọọ ihe onwunwe, m na-emeghe ọtụtụ ibe n'otu oge. Achọrọ m ka m gaa ngwa ngwa ma ghara ijide m, na enwere m ike imepe ọtụtụ ngwa ma ọ bụ ibe n'otu oge na ihe na-ebudata ngwa ngwa. Ọzọkwa na ndị na-ekwu okwu nke laptọọpụ nwere oke olu. Kedu nke na-adụ m ọdụ. Daalụ nke ukwuu
Ọktoba 2017-06 na elekere 25:4 nke abalị
Ndewo, ọ ga-amasị m ka ị nye m ndụmọdụ nke kọmputa m ga-azụta nke ọma ebe ọ bụ na m ga-amalite ịmụ ogo dị elu na automation na robotics ụlọ ọrụ na anyị ga-eme ihe niile site na kọmputa. Daalụ nke ukwuu
Ọktoba 2017-06 na elekere 13:9 nke ụtụtụ
Ọ bụrụ na ị ga-eji kọmputa na mahadum, anyị na-akwado ka ị lelee nhọrọ a nke laptọọpụ ụmụ akwụkwọ. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ n'ụzọ zuru ezu ihe ị kwesịrị ịchọ mgbe ị na-ahọrọ laptọọpụ.
Ọ bụrụ na mmefu ego abụghị nsogbu, anyị na-akwado MacBook Pro n'ihi ndị na-ekwu okwu, nke dị mma karịa MacBook Air.
N'ime abụọ ahụ, echeghị m na ị nwere nsogbu na ọkwa arụmọrụ ebe ọ bụ na ha bụ ọrụ ndị bụ isi nke onye ọ bụla n'ime ha na-arụ ọrụ nke ọma. Site na ụdị PRO ị ga-enwetakwa ihuenyo ka mma, batrị karịa, nha nha nha ka mma yana ọ ga-adịru ogologo oge ka ọ na-esikwu ike.
Ọktoba 2017-06 na elekere 20:8 nke abalị
Ana m achọ laptọọpụ nwere ike ijikọ ọrụ ndị a:
- Nlekọta ma ọ bụ ọgwụgwọ nke ọdụ data ma ọ bụ nnukwu data, dị ka mmemme maka ịhụ ihe ndị a. Ọmụmaatụ: Excel (Macros - Visual Basic -, Power pivot, Power Query) ma ọ bụ Microsoft Power BI.
- Ikike ịkwado onyonyo dị elu na ndezi vidiyo na mmemme ọgwụgwọ (dịka: 4k 60fps). Ọmụmaatụ: Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere ma ọ bụ After Effects.
M na-aga na mmefu ego nke ihe dị ka € 1.800 ma ruo ugbu a enwere m laptọọpụ MSI n'uche dị ka laptọọpụ processor M1 nke Apple.
M ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ike iduzi m n'etiti ụfọdụ laptọọpụ ma ọ bụ àgwà kacha nta nke m ga-eburu n'uche.
Ọktoba 2017-06 na elekere 21:8 nke abalị
Ọ ga-amasị m ịzụta laptọọpụ dị ike. Mgbe m na-ekwu ike, m na-ekwu na ihe niile m chọrọ ime na ya, m na-eme ya n'ụzọ kasị guzozie eguzozie na kasị ukwuu mfe na ọsọ kwere omume.
Ojiji nke ọ ga-eme bụ ịnyagharịa, ọrụ akpaaka ụlọ ọrụ, lelee ihe nkiri na-enweghị nkwụsị na ezigbo ihe oyiyi na ụda ụda yana na ọ nwere ike ibudata ngwa na egwuregwu ngwa ngwa. Ihe m ga-eji eme egwuregwu ahụ ga-abụ igwu egwu n'ụzọ na-adịghị mma, ịhụ site n'oge ruo n'oge ọ bụghị n'ụzọ siri ike ma ọ bụ aha ndị chọrọ ihe ndị na-achọsi ike. Ego mmefu m ga-adị n'etiti euro 800 na 1000.
Ọktoba 2017-06 na elekere 22:1 nke abalị
Na na mmefu ego, na Asus TUF egwuregwu. Ọ dabara na mmefu ego gị yana ejiri 16GB Ram, 512GB nke SSD na eserese GTX 1650Ti gbakọta nke ọma, nke maka egwuregwu na-enweghị eserese Ultra ga-arụ ọrụ nke ọma.
Lee ya anya, ọ bụ igwe dị mma.
Nke bụ eziokwu bụ na Apple M1 nhọrọ bụ oké nhọrọ maka ojiji na ị na-aga na-enye ya, ọbụna na-atụle na dum Adobe suite na-ama kacha maka apple si ARM processor.
N'ezie, maka ikpe gị agaghị m azụta ya na ihe na-erughị 16GB nke RAM na 512GB nke SSD. N'ime nhazi ahụ, MacBook Pro inch 13 ga-abụ euro 1900, mana m doziri na ịchọtara otu onyinye iji kpata obere ego na ọnụahịa ahụ, na ọ bụrụ na ịbụ laptọọpụ ahaziri nke ọma, ọ gaghị adị mfe. chọta ego.
Maka MSI, ha bụ laptọọpụ dị ike nke na-agba Windows. Lelee nso nso a MSI ugwu na e nwere ezigbo nhazi nhazi na ha na-ebugharị karịa ụdị egwuregwu ha.
Ọktoba 2017-06 na elekere 05:8 nke abalị
Ndewo, m na-achọ igwe, maka mkparịta ụka doro anya ma dị mma site na mbugharị, ogologo oge nke 6 ma ọ bụ 8, maka ọrụ m na-eji ọtụtụ exel, okwu na ike ike, m na-eme ọtụtụ ihe omume n'otu oge, na m dị ka foto na nhazi nke isi, ọ nwere ihe ọ bụla ị nwere ike ịkwado? Daalụ
Ọktoba 2017-06 na elekere 26:10 nke ụtụtụ
Agụọla m akụkọ gị mana m ka na-efunahụ m. Achọrọ m laptọọpụ maka ọrụ m na netwọk mmekọrịta (vidiyo dị ndụ…) M ga-arụkwa ọrụ na-edezi foto na vidiyo.
Kedu mmefu ego ị nwere? Na nke ahụ, anyị na-agbalị inyere gị aka dịka o kwere mee na ịzụrụ laptọọpụ.